Soojeedinta xiisaha leh ee farshaxanimada taariikhiga ah ee ku teedsan Canal Istanbul Route | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSoo Jeedinta xiisaha leh ee taallada taariikheed ee Wadada Canal Istanbul
22 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, VIDEO
Mid ka mid ah arrimaha ugu badan ee la is waydiin karo gudaha baaxadda Kanal Istanbul waa masiirka taallooyinka taariikhiga ah ee wadada. Warbixintii qadiimiga ahayd ee lagu diyaariyey gudaha baaxadda mashruuca Qiimaynta Saamaynta Deegaanka (EIA) ee mashruuca, “dhawrista qaabdhismeedka sida buundada taariikhiga ah, wadada taariikhiga ah, hoyga iyo gundhigga mashruuca gudahiisa iyo wajaha khatarta baabi'inta sidoo kale u guurista meel kale taşıma soo jeediyay.
Hazal Ocak oo ka socda JamhuuriyaddaSida warku sheegayo; Sida lagu sheegay warbixinta Hazal Ocak oo ka socota Jamhuriyadda, muhiimadda harada Küçükçekmece iyo nawaaxigeeda ay saameyn ku yeelan doonto mashruucan heerka koowaad “waxay siisay jawi ku habboon nolosha aadanaha tan iyo xilliyadii hore. Sababtaas awgeed, gobolku wuxuu u kuurgalay socdaalka iyo dhaqdhaqaaqa duulaanka ee bulshooyinka aadanaha ee asalka aad u kaladuwan xilliyadii hore iyo taariikhda. ”
Turkey oo go'aan ka soo baxay raad ee sal horrayn shukaansi dib u ah oo ku saabsan 600 kun Sano oo Yurub Yarimburgaz Cave sidoo kale xusid mudan in warbixinta loo gudbiyay soo socda:
Sırasında Inta lagu gudajiray daraasadahan, qorsheynta qodista badbaadinta iyada oo la raacayo jadwalka taariikhda iyo miisaaniyadda iyo bilaabida qodista badbaadinta goobaha suuragalka ah ee taariikhiga ah, labadaba diiwaangashan iyo markii ugu horeysay, waxaa laga heli karaa goobta mashruuca iyo wajahada halista burburka iyada oo la adeegsanayo howlaha dhismaha, wadada taariikhiga ah, dhismaha guryaha, Waxaa si aad ah loogu talinayaa in dhismayaasha sida gundhiga loo diyaariyo loona fuliyo waqtiga dhismaha kahor iyadoo la raacayo tusaalooyinka dhaqanka wanaagsan ee caalamiga ah sida dukumintiga, ilaalinta, u guurida meel kale iyo in lagu muujiyo halkaas, sida mashruuca Hasankeyf. ”
'SANAD KAN MA AHA IN FURAN'
Yiğit Ozar, Gudoomiyaha Laanta Magaalada Istanbul ee Ururka Cilmiga Dhalinta, ayaa qiimeeyay warbixinta sida soo socota:
25 Waxaan aragnaa XNUMX dhaqameed oo diwaan gashan oo jidka ku jira. Hantidaas waxaa ka mid ah Rhegion Archaeological Archaeological, meelaha la dego sida 'Küçükçekmece Lake iyo nawaaxigeeda', iyo sidoo kale hantida dhaqameed ee leh waqtiyo kaladuwan iyo waqtiyo ay ka mid yihiin buundooyinka iyo biyo mareennada, qaababka beeraha, jidadka difaaca oo ka kooban bakhaarada iyo dhismeyaasha taranka. Intaas waxaa sii dheer, waa inaan maskaxda ku haynaa in Yarımburgaz Cave, oo ka kooban xog muhiim ah oo qadiimiga ah oo ka baxsan cabirka Istanbul, uu ku yaal gobolkan.
Waa macquul in hanti dhaqameed cusub la kulmi doono haddii dhismaha kanalka la bilaabo. Xaaladda hadda jirta ee hantida dhaqan caan ah, shuruudaha ilaalinta ee kaladuwan ayaa loo go'aamin karaa iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka ilaalinta gaarka ah ee mid kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in lagu ilaaliyo hantidaan dhaqameed ee deegaankooda, dareen ahaan, deegaankooda dabiiciga ah, halkaas oo ay tahay in laga dhiso, taas oo ah in aan laga warqabin dhammaan. Nasiib darrose, waxaa la soo jeediyey in hantida dhaqameed sida wadooyinka taariikhiga ah, buundooyinka, hoyga iyo xayndaabyada la dhisay oo laga guuro goobta sida Hasankeyf.Waxaa intaa dheer, waxay noqon kartaa tusaale 'dhaqan fiican'.
Dabcan, ma aha barakicinta hantida dhaqanka ee Hasankeyf iyo gaadiid ku qaadashada hantida dhaqameed ee jidka loo maro furitaanka kanaalka Istanbul looma tixgelin karo inay tahay arin farsamo oo loo yaqaan 'dhaqan wanaagsan'.
Markii la qiimeeyo saameynta kanaalka lagu furayo hantida dhaqameed, go'aanka ugu cad ayaa la bixin karaa waa inaan ilaalino hantida dhaqameed guud ahaan iyo deegaankeeda dabiiciga ah.
'32.7 .XNUMX METION METION BIYAHA OO LAGA Lumin doono '
Meryem Kayan (Madaxweynaha laanta Istanbul ee Rugta Injineeriyada Deegaanka) ayaa yiri:
“Saamaynta Sazlıdere Dam iyo Terkos Lake oo ka dhasha mashruuca Canal Istanbul, 32.7 milyan oo mitir cubic oo biyo ah ayaa waayi doonta sannad walba sida lagu sheegay warbixinta EIA.
Dhismaha Mashruuca Buundada 3aad, Mashruuca Wadada Waqooyiga Marmara iyo Wadooyinka Isku xira iyo dhismaha garoonka Diyaaradaha 3aad, qiyaastii 12 kun hektar oo dhul beereed ah iyo 2 kun hektar oo dhul-beereed ah - dhul daaqsimeed ayaa lumiyey dhaqankoodii beeraha. 23 milyan oo mitir murabac ah oo duur ah iyo 136 milyan mitir murabac oo dhul beereed ah ayaa lagu baabi'in doonaa Kanal İstanbul.
Sida lagu sheegay warbixinta EIA, wadar ahaan 1.155.668.000 mitir cubic oo qoditaan ah ayaa la sameyn doonaa inta lagu guda jiro Canal Istanbul, qodista dhulka iyo harooyinka bada. Waxaa la rumeysan yahay in cadadka qodista ee lagu cadeeyay warbixinta EIA ay ka yar tahay caddadka qodista ee runtii dhici kara.
Agabyada ka soo bixi doona laamiga Küçükçekmece, galitaanka Black Sea iyo aagga Dekadda Madoow ee Black Sea waxaa lagu qiimeyn doonaa aagagga Badda Madoow. ”
'DAAWOOYINKA WAA IN AY KUGU SAMEEYAAN SANADKII CILMI CADDAALADA'
Ayşe destructor (qorsheeyaha magaalada oo ka socda Difaaca Waqooyiga kaymaha) ayaa yiri, mashruuca Kanal Kanal İstanbul, ee lagu dhawaaqay ballanta doorashada, waa mashruuc lagu furayo waqooyiga magaalada Istanbul dhismaha iyo in la dhiso magaalo cusub oo ah “Waqooyiga Istanbul, iyo in lagu rito kiro cusub qeybta dhismaha ee burbursan. Xaqiiqdii maahan mashruuc loogu talagalay Istanbul, oo loogu talagalay Istanbulites, dhammaan waxyaabaha ku nool Istanbul. Annaga oo ah Difaaca Kaymaha Waqooyi, waxaan ugu yeernaa dhammaan mashaariicda lagu bartilmaameedsanayo Waqooyiga kaymaha "Mashruuca Killer". Sababtoo ah labadaba waxay burburiyaan Istanbul iyo xayawaannada ku yaal Waqooyiga Waqooyiga oo waxay ku daadiyaan guryaha iyo buulkooda waxyaalaha nool oo dhan oo la taaban karo. Bartilmaameedyada salka ku haya maalgashiga noocan oo kale ah xilliyadii xiisadda cimilada ayaa si muuqata u muuqda. Mashruucan, oo qatar ku ah nolosha dhammaan xayawaannada biyaha ku jira Badda Marmara iyo Badda Madoow, ayaa ujeeddadiisu tahay furitaanka aagga in dib loo dhiso oo la abuuro garoon cusub oo kiro loogu talagalay shabakadda dhismaha dillaaca.
Dadka imanaya Istanbul ee leh mashruuca dilaaga dilaaga ah ma laha awood ay ku qaadaan culayska ay ku keeni doonaan magaaladan. Waxaan dhahnaa: bırak Jooji khayaanada Istanbul ee mashaariicda kor ku xusan oo na dhageyso! ”
Nurettin Yılmaz oo 75 jir ah, ahna gudoomiyaha ururka midnimada iyo wadajirka ee xaafada Yarımburgaz, ayaa sheegay in kuwa weydiisanaya qiimaha dhulka ay kordheen mashruuca kadib wuxuuna yiri, "Waxaan nahay daryeele xaafadeena. Waxaan rabnaa in xaafaddeena ay hal talaabo hore u sii qaaddo. Dhibaatada noogu weyn waa sooneynta ”.
Yalçın Kır, oo ah madaxweyne kuxigeenka 42-sano jirka ah, ayaa yiri, waalane dadka halkan jooga ma ahan kuwo bulshada u qalma. Ma haysto baarkin. Meel bulsheed malahan. Ma jiro aag waxbarasho, xarun caafimaad looma baahna waxaadna ka hadlaysaa xaafad leh qorshe horumarineed 10 sano ah. Waxaan la dhibaataynay sanado. Tani waa mudnaanteena. Channel Istanbul xaqiiqdi maahan mudnaanteena. Waxaan rabnaa in meelaha bulshada laga abuuro halkaan. ”
'CHANNEL ISTANBUL WAAJIN KARA DALKA'
Professor Cemal Saydam wuxuu caddeeyey in mashruuca Channel-ka Istanbul uu dhammayn doono Badda Marmara. “25-ka mitir ee ugu horreeya Badda Marmara waa Badda Madoow halka hooseysana waa biyaha cusbada leh ee Badda. Qaab dhismeedkani waa mid aad u cajiib badan isla mar ahaantaana isku dheelitirnaan weyn ayaa leh. Haddii kanaalka laga hawl geliyo Istanbul, dheelitirkaas waa la carqaladeyn doonaa Badda Marmarana way dhiman doontaa. ”
“Aqoon-isweydaarsiga Badda oo ay soo qabanqaabisay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM), mashruuca Kanal Istanbul, oo ahaa diiradda doodaha, ayaa sidoo kale laga wada hadlay. Professor Cemal Saydam wuxuu sheegay in cawaaqib xumada ka dhalan karta ku ciyaarista dabeecadda aan horay loo sii ogaan karin isla markaana Badda Marmara aysan qaadi karin culeyska xiriir cusub.
Xarriiqaya in kasta xeebaha Turkey ee kala duwan ka hosting kasta oo kale oo kasoo muuqday badda hufan, "ka Badda Madow si Mediterranean ka gudubtaan, waxay ka dhigan tahay ku biiray xaaladaha badda imaanayn ugu dunida ee. Haddii aad fahanto labadan badood, markaa waad si buuxda u fahmi kartaa Marmara. Marmara, oo la aasaasay 3500 oo sano ee la soo dhaafay, ayaa xasaasi u ah sidaa darteed ma sii noolaan karto haddii ay dhammaato
CUDURKA BUKAANKA EE ASTHMA…
Badda Marmara waxay lamid tahay cunug qaba cudurka neefta. Cemal Saydam wuxuu yiri, "Markaad furaha labaad u furto Badda Madow, biyihiisu si dhakhso leh ayey ugu qulquli doonaan badda Marmara. Waraaqda dufanka badan ee nafaqada ayaa cadaadis ku saari doonta substrate-ka sidaas darteedna ogsijiinku si dhakhso leh ayuu u yaraanayaa. Marka oksijiinku ka baxo, dib uma noqonayso. Waad ogtahay estamentans urku hore. Markan, ma aha oo kaliya geeska Dahabka ama Baasbooriyada laakiin gebi ahaanba Marmara way dhiman doonaan. Dhimashadani waxay keenaysaa hydrogen sulfide. Mid ka mid ahi ma leh dareen ka sarreeya dhammaan urka. Si kastaba ha noqotee, waan ururin karnaa walaxdaan, xitaa haddii ay tahay mid ka mid ah hal milyan oo kul.
'Waa inaan difaacnaa sii waditaanka Montreux'
Jiraan barta. Dr. Jale Nuur Ece wuxuu carrabka ku adkeeyay in Shirweynihii Montreux uu door muhiim ah ka qaatay nabadda gobolka iyo adduunyada muddo 83 sano ah .. Açmak Furitaanka Montreux ee dooddu waxay u horseedi doontaa khatarta ah luminta qaranimadeena iyo xuquuqdeenna dariiqa iyo awooddeena Badda Madow. Waa inaan ka fogaano tan oo aan difaacnaa sii wadida Montreux. ”
Baaraha Cihan Uzunçarşılı Baysal wuxuu kaloo sheegay in Kanal Istanbul looga hadlay mowduucyo badan oo kala duwan xagga qiimaha, dhaqaalaha, deegaanka, xeebaha iyo heshiisyada caalamiga ah laakiin dadka waa la iska indhatiray.
Uzunçarşılı wuxuu yiri, "Waa inaan kahadalno sida dadka deegaanku dareemayaan ee ku saabsan gobolka Waqooyiga Forest oo loogu dhawaaqay aagaga Mashruucyada Mega. Dadka lagu sheegay warbixinta EIA laakiin waxay sheegeen kaliya sida tirooyinka aysan ogeyn waxa mustaqbalkoodu noqon doono. Wax fikir ah kama lihin waxa ku dhacay dadka ku nool garoon diyaaradeed cusub. Isla aayahaasi dadka ayaa sugaya.
Dadka halkan kunool qarniyo, beero iyo xoolo dhaqsi kuma sii noolaan doonaan dhulkii awow. Dhulkooda wuxuu ku jiraa gacanta shirkadaha waaweyn ..
Taallo taariikhi ah oo dib loo asaasay intii lagu guda jiray dhismaha Yenikapı-Taksim metro…
Dhibaatooyin ka soo cusboonaaday qodobada Marmaray
Qiimaha guryaha ee ku yaala wadada loo yaqaan Channel Istanbul ayaa kor u kacay
Soo-saarista sawirrada Marmaray ayaa lagu soo bandhigayaa matxafka hawada furan si loo dhiso Sultanahmet.
Artifacts waxaa lagu soo bandhigayaa laba matxaf oo cusub
Turkey Qoraalka Works Hay'adda Shaqaalaha si Samee Iibsasho
3. mashruuca biriijka
Xusuus taariikhi ah oo ku saabsan Waddada Canal Istanbul